NewsBlur, beddelka ayaa jira | Laga soo bilaabo Linux
NewsBlur, beddelka ayaa jira
Anti | | Aplicaciones, Kuwa kale
Waa maxay fikrad fiican oo ku saabsan quudinta! Waad wada ururin kartaa dhammaan boggaga aad jeceshahay oo aad si deggan ugu akhrisan kartaa, iyadoon loo baahnayn inaad si xilliyo ah u booqato degel si aad u aragto haddii wax cusub ay horay u soo baxeen. Waxaan aad u isticmaalaa quudinta (ilaa 40 goobood, wax yar ama in yar ka yar), laakiin waan ogahay dadka iska diiwaangeliya in ka badan 700 font. Waa tiro yaab leh oo runtii, laga cabsado in la maareeyo.
Waxaan la hadlayaa dhagaystayaal aqoon u leh Google Reader. Akhristaha quudinta meel walba. Laakiin taasi kama dhigeyso waxa ugu fiican, ama ugu habboon. Iskusoo wada duuboo, ka dib markii la jaray shaqooyinka bulshada ee uu ku lumay Google+ (wixii hore loo qoray oo ku filan). Si aan runta u sheego, waligay ma aanan isticmaalin, markaa taasi ma ahayn sababta ugu weyn ee aan u joojiyay isticmaalkeeda. Waan joojiyay isticmaalkeeda sababtoo ah waxaan ogaaday (mahadsanid qoraalkaan) NewsBlur taasna waxay u timaadaa si ficil ahaan u xalliso dhammaan dalabaadkayga, istaroog. Aynu si dhow u eegno astaamihiisa, markaa waad arki kartaa sababta aan aad ugu jeclahay.
Inta badan. Laga bilaabo naqshadeynta. Google Reader Waxay ahayd wax laga naxo markii aan ka tagay waxaana laga yaabaa inay wax badan soo hagaagtay ilaa waqtigaas. Laakiin NewsBlur waa wax fiican sida ay hadda tahay iyo naqshadeynta oo ah mid aad u cad oo raaxo leh. Wax walba waxaa loo dejiyey inay noqdaan kuwo dareen leh. Halkan waxaa ka muuqda dhibaatada ugu weyn waana taas NewsBlur lama tarjumay. Maaha inay jiraan waxyaabo badan oo la fahmi karo, laakiin waxyaabaha qaarkood waxay ku fiicnaan lahaayeen luqado kale. Aynu marka hore aragno sida aragtida caadiga ahi u eg tahay:
Wax aan caadi ahayn. Haddii ay u leexdaan dhanka midig waxay helayaan quudinta aan raaco ee warka leh. Wax cajiib ah oo ku saabsan NewsBlur waa kartida akhriska caqli badan. Calaamadeynta sumadaha daabacaadda, bogagga, qorayaasha iyo xitaa ereyada cinwaanada; waan qiimeyn karnaa degel walbana waxaan u aqrin karnaa si deggan, dhammaantoodna waxaa lagu sifeeyay sida aad u jeceshahay. Qeybta hoose waa biiro taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan balaarino ama xirno muuqaalka, si aan kaliya ugu aqrino cagaarka [waxa aan ugu jeclaan laheyn], midab huruud ah [caadi ah] ama wax kasta oo ku soo kordha quudinta oo dhan. Aad ayey faa'iido u leedahay markaad raacdo degel gaar ah oo cusbooneysiiya.
Hadda, haddii aad bidix u leexato waxaad arki doontaa saddexda aragti ee aad leedahay NewsBlur: Asal, Quudin iyo Sheeko. Muuqaalka Sheeko waa hab lagu daawado barta ku dhex jirta akhristaha quudinta. Tani way fiican tahay, maxaa yeelay waxay noo ogolaaneysaa inaan faallo ka bixinno annaga oo aan ka baxayn ama ka baxsanaynno quudinta oo keliya qayb ka mid ah qoraalka gudbisa. Ama qaar aan sawirada dhaafin. Halkan si faahfaahsan:
Aragtida asalkuna waa isku mid, laakiin waxay ku socotaa bogga hore ee goobta ee ma aha sheekada shaqsiga ah. Waxaan u maleynayaa inay tani waxtar leedahay markaad booqato degel cusub afxumo, taas oo aan gadaal ka sharixi doono. Hadda aan diirada saarno dhinaca:
Calaamadaha madow, waxaan ku fahmi karnaa sida kala-soocayaasha; waxay ku nool yihiin sheekooyinka aan kaydinno si ay hadhow u akhriyaan ama si ayan ugu dhex lumin daadadka macluumaadka. Isla markiiba ka hooseeya, ka afxumo. Kuwani waa meelaha ay adeegsadayaashu ku wadaagaan sheekooyinka aan wax ku falanqeyno, in kasta oo riixista badhanka "Share" ay ku filan tahay. Sida aad u aragto, waxay yeelan karaan magacyo habboon; in badan oo iyaga ka mid ah waa wax lala yaabo. Waana uga tagi karnaa sidaan rabno, midabada isla codsigan na siiya ama annaga CSS annaga gaar ah, in kasta oo aanan awoodin inaan tijaabiyo tan dambe.
Qeybta hoosena, quudintooda lafteedu, durdur kasta oo leh xaddiga wararka ku jira cagaar ama jaalle uu leeyahay. Sirdoonka NewsBlur ka dhigaysa wax walba mid aad u wanaagsan. Waa khibrad aad u wanaagsan in wax la kala saaro oo waxa ku jira ay hal guji u jiraan.
Waxa kale oo jira codsiyo moobil ah. Waxaan isticmaalaa sarkaalka Android, laakiin waqti fog kahor nooc aan rasmi ahayn oo loo yaqaan Ballaar. Abka rasmiga ah ayaa shilalka mararka qaarkood, laakiin si wanaagsan ayuu u fiican yahay isticmaalka guud. Ayaa loo heli karaa Android iyo macruufka qaababka rasmiga ah, laakiin waan ogahay jiritaanka macmiil loogu talagalay MeeGo. Markasta oo ay sii kordho saldhigga isticmaalaha barta, sida ugu wanaagsan ayaan ku sameyn doonnaa codsiyada dhinac saddexaad.
Faa'iidooyinkaas oo dhan ka dib, maxaad sugeysaa inaad isku daydo? Joojinta ku tiirsanaanta Google ee doorbidaysa ilmo dhashay iyo bulsho aad u saaxiibtinimo ayaa gabi ahaanba ii suuragal ah. Shirkad (qeybta tikniyoolajiyada, hubaal) waxay qori kartaa dhamaan ilaha iyo hadalada xun ee ay awoodo isla markaana wadaagto posts kugu habboon. Ganacsi weyn, waxaad isku xayaysiisaa waxyaabaha dadka kale ka kooban yihiin oo waad la wadaagaysaa oo keliya. Xatooyo ma jirto.
NewsBlur Waa bilow oo waqti yari ku socoto wadada. Akoon bilaash ah ayaa ku siinaya awood aad ku raacdo 64 bog oo leh hal nooc premium qiimo aad ku dooran karto. Waxay noqon kartaa xad xadidan, laakiin waxaan kaa caawin karnaa mashruuc cusub oo aduunkan kula imanaya xoog.
Iyo tan ugu fiican, waa software bilaash ah. Waali maahan waxaan kugula talin lahaa wax gaar ah halkaan waana mid ka mid ah tusaalooyinka ugu wanaagsan ee aan ku aqaano hal-abuurnimada leh rukhsadaha ilaha furan. Xitaa codsiyada moobiilka waxaa lagu daabacaa liisanka MIT, taas oo nooga sheegeysa sida ay uga go'antahay Samuel Clay la mashruuca. Waxaan si buuxda ugu qanacsanahay inaan iibsado rukunka premium isla marka aad dhaafto 64 bog, gaar ahaan haddii aad bilowdo adeegsiga bitcoins sidoo kale, horumariyaha ugu weyn Ma tixgelinaysaa.
Hadday rabaan inay soo galaan, si toos ah ayey aniga ii raadsan karaan aniga ama sheekooyinka ugu caansan ee barta, oo uruurisa sida ugu fiican ee akhrintayada. Weli waxaa buux dhaafiyay dadka ku hadla Ingiriisiga, laakiin waa sii badanayaa. Waxaa la muujiyey in waxyaabaha kale ee jira ay jiraan. Iyo inaad kugula talin karto wax aan jeclahay oo aad adiguna aad u jeclaan doonto.
Isdiiwaangeli newsblur.com si aan u bilaabo tijaabinta, waxaan ilaaway inaan bixiyo xiriir.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » NewsBlur, beddelka ayaa jira
Waxaan kaloo kugula talinayaa http://www.feedly.com
Waxaan kugula talinayaa GoodNoows
Waa inaan sameynaa liiska quudinta :).
Waxaan kula talin
Waqtigan xaadirka ah midka Opera ee isku dhafan sifiican ayuu iigu socdaa aniga, laakiin aan aragno sida ay u shaqeyso.
Si daacadnimo ah, waxay umuuqataa mid wanaagsan, laakiin tan nafteyda inaan kudhameeyo 60 goobood sida maya .. Google Reader waxaan heystaa 185 rukun waana ku dari karaa inta aan rabo. Waa wax fool xun, haa, laakiin aniga iima xaddidayo dareenkaas.
Waxaan kaloo aad u isticmaalaa Akregator waxaanan tijaabinayaa goodnoows si aan u arko sida ay u shaqeyso 😀
Si hufan, adeegsiga noocan ah ayaa ku habboon sirdoonka macmalka ah si uu ugu shaqeeyo sida ugu fiican. Way fiicantahay, inaad runta sheegto.
Akhristayaasha khadka tooska ah ee ku saleysan softiweerka bilaashka ah, oo midkood ku rakibi karo serverkooda:
Yar Yar RSS: http://tt-rss.org
Newsblur waa bilaash, laakiin waxay umuuqataa inaad ubaahantahay adeege heegan ah iyo waliba kombiyuutar heegan ah, maxaa yeelay tilmaamaha ayaa leh wax ... 🙂
Dabcan, way adagtahay in la rakibo. Haddii aadan jeclayn fikradda akhristaha shabakadda ku saleysan, akhristaha desktop ayaa kugu filan. Laakiin taageerida rukumashada uma muuqato aniga fikrad wanaagsan aniga, marka laga reebo inaan awoodo inaan kala tashado meel kasta.
post xiiso leh
Sanka, laakiin ma aha xiriirin nacas ah mawduuca!
Qalad rookie ah. Tixgeli in aan tirtiraha waxoogaa ku dhegay. http://www.newsblur.com
Waxaan adeegsanayey adeeggan muddo sannad ka badan. Kuma qancin Google Reader sababtoo ah xaddiga xogta ay ku keydisay shirkaddan. Weligay kamaan dhammayn rumaynta "Dont Be Shar."
Waan ogahay inay jiraan akhristayaal quudin kale oo furan, laakiin waxaan u maleynayaa - i sax haddii aan khaldanahay - waa midka kaliya ee isku xira daruuraha. Aad ayey ii anfacaysaa aniga in quudintayda ay ka wada shaqeeyaan kumbuyuutarradeyda kala duwan, oo leh OS kala duwan iyo xitaa shabakadda qalabka saddexaad.
Xitaa sidaas oo ay tahay, weli waxaa ka maqan waxyaabo yaryar oo lagu hagaajiyo iyo cayayaanka lagu saxo dhammaan noocyadeeda; si kastaba ha noqotee, waxaan u maleynayaa in Samuel uu sameynayo shaqo aad u fiican.
Waa maxay blurblog? Waa inaan isku xoojino bulshada noocaas ah, waxaan leeyahay. Intaa waxaa sii dheer, DesdeLinux wuxuu sameyn karaa buqshad sidoo kale wuxuu la wadaagi karaa wararka iyo maqaallada labadaba iyo bogag kale oo xiiso leh.
Su'aashu waxay u egtahay doqon laakiin… Sidee loo rakibay sidee loohelaa? Tani way kufiican tahay khubarada laakiin… iyo kuweena hada bilaabaya? Fadlan ha na iska indhatirin, sharax sida loo sameeyo.
Qofkasta oo wax weydiya wuu bartaa, qofkii ku qosla su'aashaana wuxuu ilaawaa inay iyagana ahayd inay weydiistaan ​​si loo ogaado. Qofna kuma dhalan inuu barto ... Mise haddii?
Tag http://www.newsblur.com oo iska qor. Waxay u egtahay doqon, laakiin waan u xiisay.
Anti, ka dib waan la tashanayaa. Weligay ma isticmaalin howlaha bulshada. Ka dib waan la tashanayaa oo dhejinayaa.
Waa adeeg shabakadeed. Waad iska diiwaan gelin kartaa oo aad ka isticmaali kartaa http://www.newsblur.com
Waxay sidoo kale leedahay codsiyo loogu talagalay android iyo IOS dukaamadahooda. Kaliya raadinaya "newsblur". Midka android waa bilaash, waxaan qiyaasayaa in macruufka sidoo kale.
Ku jawaab vlar
Huew, waxaan isticmaalaa Liferea, xoogaa wey cuslaatay laakiin waa jacayl.
Xiiso leh, inkasta oo qaabka NewsBlur ay aniga iigu muuqato mid aniga igu xun: / Waxaan doorbidayaa inaan u adeegsado Google Reader macaamiisha. On Linux waxaan u isticmaalaa Lightread, iyo labada Android iyo iOS waxaan haystaa Feedly (on Android waxaan haystaa beta beta ee barnaamijka).
Haye, qoraalkani aniga ayuu igu fiicanyahay.
Sida aan u isticmaalo kde, marwalba waan isticmaali jiray akregator laakiin waxaan jeclaan lahaa in aan isticmaalo macmiil kumbuyuutar ah oo ku kaydiya quudinta internetka, tusaale ahaan akhristayaasha google, oo aan la wadaago macaamilka desktop-ka.
Wax talo bixin ah oo ku saabsan debian?
Si loo hagaajiyo muuqaalka iyo shaqada Google Reader ee Firefox waxaa ku jira GoogleReaderPlus plugin:
Waxa kale oo ay kuu ogolaaneysaa inaad ku shubto boggaga qaab dhismeedka si toos ah ama dalab, marinka loo maro sharraxaadda soo socota ama tii hore iyadoo la riixayo badhanka jiirka, tilmaamaha jiirka, isku xirka https, ka saar xayeysiiska, bedel cabirka farta, isticmaal mawduucyada Firefox People, iwm. .
In kasta oo aysan wax badan u qaban, Android-ka mid kale oo aad u dhammaystiran oo aad ugu habboon soo dejinta RSS iyo akhrinta khadka tooska ah waa JustReader:
Qeybinta ugu caansan ee 2012 ee barnaamijka 'Distrowatch'
Sida loo ilaaliyo boggeena adoo isticmaalaya .htpasswd + Tusaalooyin